Firefox 94 Inouya Nezvishandiso Zvekugadzirisa Enhancements, Specter Dziviriro Uye Zvimwe | Linux Addicts
Firefox 94 Inouya Nezvishandiso Zvekugadzirisa Enhancements, Specter Dziviriro Uye Zvimwe
Iyo itsva vhezheni yeFirefox 94 yakatoburitswa kare pamwe chete nekuvandudzwa kweLTS (Nguva Yekutsigirwa Yakareba) 91.3.0 shanduro. Mune iyi vhezheni nyowani yebrowser inounzwa, shanduko dzakasiyana dzakawedzerwa dzinovandudza mashandiro uye ndangariro manejimendi ebrowser, pakati pezvimwe zvinhu.
Pamusoro pehunyanzvi uye kugadzirisa bug, Firefox 94 yakagadzirisa kusagadzikana gumi neshanu, ayo gumi anocherechedzwa seane ngozi. 10 kusasimba kunokonzerwa nematambudziko ekurangarira, senge buffer mafashama uye kuwana kune dzakatosunungurwa nzvimbo dzendangariro. Aya matambudziko anogona kutungamira mukuitwa kwekurwisa kodhi kana uchivhura mapeji akagadzirwa.
1 Main nhau muFirefox 94
Main nhau muFirefox 94
Pakuchinja kukuru kwakamira mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 94 semuenzaniso nitsva "zve: unloads" peji yebasa, uko mushandisi anogonae nechisimba kudhawunirodha anonyanya kushandisa zviwanikwa tab ndangariro kuderedza kushandiswa kwendangariro pasina kuvavhara (zvirimo zvichadzoserwazve kana uchichinja kune tab).
Iro peji rinonyora matabo anowanikwa mukurongeka kwekutanga kune yakaderera memory yekuda. Izvo zvakakosha mune iyo rondedzero inosarudzwa zvichienderana nenguva yekuwana kune iyo tebhu uye kwete kubva pane zviwanikwa zvakadyiwa.
Imwe shanduko inomira pachena ndiyo nyowani hurongwa hwakasimba hwekuzviparadzanisa nevamwe, yakagadzirwa mukati megadziriro yepurojekiti yeFisión. Kusiyana nekugovewa kwekupokana kwekugadziriswa kwetabhu muboka riripo rekuita (8 nekukasira), iro rakashandiswa kusvika zvino, lock mode inofambisa kugadzirisa kwesaiti kune yayo yega yega nekupatsanura kwete nematabo, asi nemadomasi. Iyo modhi haina kugoneswa kune vese vashandisi, iyo "inenge: ferences # yekuyedza" peji kana iyo "fission.autostart" kuseta mukati: config inogona kushandiswa kudzima kana kuigonesa.
Nyowani modhi inopa yakavimbika dziviriro kubva kuSpecter kurwiswa, inoderedza kupatsanurwa kwendangariro uye inobvumira kumwe kuparadzaniswa kwezviri mukati mezvinyorwa zvekunze uye iframes uye inodzosa ndangariro kune inoshanda sisitimu zvakanyanya, inoderedza kukanganiswa kwekuunganidza marara uye kuverengera kwakanyanya pane mamwe maitiro, inowedzera kugona kwekutakura mitoro pakati peakasiyana CPU cores uye. inovandudza kugadzikana (kuvharidzira maitiro ayo anogadzirisa iframe haizoshandisi saiti huru uye mamwe ma tabo mukati mese).
Ukuwo, Multi Account Containers plugin yakapihwa nekushandiswa kweiyo pfungwa yezvigadziro zvemukati, izvo zvinogona kushandiswa flexible kutsaura nzvimbo dzisina tsarukano. Containers inopa kugona kuparadzanisa marudzi akasiyana ezvinyorwa pasina kugadzira akaparadzana profiles, zvichikubvumidza iwe kuparadzanisa ruzivo kubva kune rimwe nerimwe mapeji mapoka.
Kana dziri shanduko dzine chekuita neLinux, kune graphical nharaunda uchishandisa X11 protocol, nyowani yekudzosera backend inogoneswa nekusarudzika, iyo inomira pakushandisa iyo EGL interface kuratidza magiraidhi pachinzvimbo cheGLX. Iyo yekumashure inotsigira yakavhurwa sosi madhiraivha eOpenGL Mesa 21.x uye madhiraivha eNVIDIA 470.x.
Tinogona zvakare kuona kuti eChimiro chinogoneswa nekusarudzika chinogadzirisa matambudziko neclipboard mukati protocol-based environments Wayland. Iko kuumbwa kunosanganisirawo shanduko dzine chekuita nekubata kwepop-up windows munzvimbo dzakavakirwa paWayland protocol. Wayland inoda hutongi hwakasimba hwemahwindo epop-up, kureva kuti, hwindo guru rinogona kugadzira hwindo remwana rine pop-up hwindo, asi inotevera pop-up hwindo rakatangwa kubva pahwindo iri rinofanira kubatanidzwa kune yekutanga hwindo remwana, richigadzira. cheni.
sudo snap install firefox-94.0.snap
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 94 Inouya Nezvishandiso Zvekugadzirisa Enhancements, Specter Dziviriro Uye Zvimwe
Kutumirwa kwemakomputa uye mahwendefa kwakashanduka sei mune post-denda
Video editing. Kufananidza yakaiswa software nemasevhisi epamhepo.